Liverpool Oo Kusoo Biirtay Tartankii Xiddiga Real Madrid Ee Dani Ceballos, Tottenham Oo Ku Xifaalinaysa & Kooxda Ay Madrid La Doonayso Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
Liverpool Oo Kusoo Biirtay Tartankii Xiddiga Real Madrid Ee Dani Ceballos, Tottenham Oo Ku Xifaalinaysa & Kooxda Ay Madrid La Doonayso Oo La Ogaaday.
Kooxaha horyaalka Premier League ee Liverpool iyo Tottenham ayaa la filayaa inay dagaalkoodii Final-kii Champions League haatan u leexin doonaan dhinaca suuqa kala iibsiga iyagooku tartamaya Dani Ceballos oo Real Madrid ka tirsan.
Ceballos ayaa xilli ciyaareed gaabis ah kusoo qaatay Real walow uusan fursad buuxda ka helin waxaana uu 23 kulan oo horyaalka ah ugu soo dhaliyay kaliya saddex gool.
Dhinaca kale xiddigan ayaa kooxdiisa soo matalay saddex kulan oo Champions League ah iyo lix kale oo Copa Del Rey ah balse wax gool ah ayuusan dhalinin.
Dani ayaa bandhig aad u wanaagsan isla markaana qasbay in kooxo badani ay daba raacaan kasoo sameeyay koobkuu Euro U21 ee uu dhawaan xulkiisa Spain lasoo qaaday isagoo ahaa udub dhaxaadkii La Roja ee tartankaas.
Wargeyska Marca ee fadhigiisu yahay dalka Spain ayaa maanta boggiisa hore halka hoose kaga xardhay in Liverpool ay Tottenham kula soo biirtay tartanka 22 jirkan.
Wargeyska ayaa sheegaya in tababaraha kooxdaas ee Jurgen Klopp uusan doonayn inuu wax fursad ah siiyo Madrid isla markaana uu doonayo inuu xiddigan toos u iibsado heshiiskana uusan ku darin qoddob ay Real dib ugula wareegi karto.
Dhinaca kale Tottenham oo kusoo jirtay maalmo mashquul ah soona samaysay saxeexyada Tanguy Ndombele iyo Jack Clarke ayuu wargeyska AS toddobaad kahor sheegay inay wadahadalada Ceballos la bilaabeen Madrid.
Tottenham iyo tababaraheeda Mauricio Pochettino ayaa ah kuwa markasta gacanta sarre ku yeelan kara tartankan ay kula jiraan Liverpool sababtoo ah in Real Madrid ay ka leedahay danta ah saxeexa Christian Eriksen.
Madrid ayaa heshiiska ay ku doonayso Eriksen ku fududaysan karta inay Spurs iskugu soo darto lacag iyo Ceballos kaas oo ah qorshe qancin kara kooxda ree London halkii ay Eriksen xagaaga dambe si xor ah ku waayi lahaayeen.